Oyena Mvelisi weNdibano yeTurnkey PCB – PCBFuture - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Oyena Mvelisi weNdibano yeTurnkey PCB – PCBFuture
Yintoni indibano yePCB ye-turnkey?
Indibano yeTurnkey PCB ikwabizwa ngokuba yindibano enye yokumisa iPCB.Yinkonzo ukuba umthengisi aphathe yonke imiba yezisombululo zePCB, kubandakanywa ukwenziwa kwePCB, indibano yePCB, ukukhangela amacandelo kunye noVavanyo.Ke ngoko, odola iinkonzo zePCB ezijikajikayo zikunika inkululeko engakumbi yokugxila kuyilo lwemveliso ye-elektroniki kunye nomsebenzi wokuthengisa.
Njengomnye wababoneleli abambalwa be-Turnkey PCB egxile kumgangatho, i-PCBFuture ineminyaka engaphezu kwe-10 yamava ekuboneleleni ngeenkonzo zePCB ezikhawulezayo, ezithembekileyo kunye neendleko ezisebenzayo.Ubungcali bethu kwi-Turnkey PCB yenza abathengi bethu bonge ixesha kunye nemali eninzi.Ukuthembeka kwethu kusigcina siphambili kushishino lwePCB eTshayina.
Iinzuzo zeTurnkeyindibano yebhodi yesiphaluka eprintiweyo
Kukho izibonelelo ezininzi ukuba ukhethe indibano yeTurnkey PCB umboneleli, Njengo:
1. Unokunciphisa iindleko
Ngokwesiqhelo kufuneka sisebenze nababoneleli abaninzi kwii-odolo zezitshixo.Ababoneleli abatshatileyo bathetha ukuba uya kufuna amaxesha ambalwa okuhambisa, umenzi omnye wokumisa we-PCB uya kukunceda uphelise iindleko zokuthumela.Ngaphezu koko, umthengisi omnye oqeqeshiweyo uya kwenza umsebenzi wakho usebenze ngakumbi, unokukunceda unciphise iindleko zolawulo lwangaphakathi.Ngenxa yolawulo lwethu olubekwe kwindawo enye yee-odolo, umsebenzi wethu uya kusebenza kakuhle kwaye ucuthe iindleko.
2. Ungafumana umgangatho olungileyo
Ekubeni ethembekileyoPCB indibano umenzibaye bakhe intsebenziswano yexesha elide kunye nabanikezeli abanokuthi babancede bafumane owona mgangatho uphezulu wecandelo ngexabiso eliphantsi.Ukuba ufuna ukuthenga amacandelo ngokwakho, kunokwenzeka ukuba ufumane intengiselwano yokuqala.Oku kungenxa yokuba awunabo ubuchwephesha bokukhangela umgangatho.Ukuba ungumthengi wexesha elinye, amathuba makhulu ngakumbi.
3. Unako unlimited inani odolo
Ngamanye amaxesha, unokufumanisa kunzima ukuthenga izinto zeprototype yakho okanye iiodolo zobungakanani obuncinci.Abavelisi bendibano ye-Turnkey PCB baneenkqubo ezinokubeka ii-odolo ezincinci kunye kwaye zibadibanise kwi-oda enye enkulu.Iqabane lakho lendibano ye-turnkey PCB liya kuvuya ukwenza ii-PCBs zakho ngokobuninzi obufunekayo.Njengoko ishishini lakho likhula, unako ukugcina iqabane elifanayo.
4. Unganciphisa umhla wokuhanjiswa
Ukuba ucinga malunga nokuya kuyo yonke inkqubo yendibano yePCB ngokwahlukeneyo.Kuya kufuneka ubeke iodolo yokwenziwa kwePCB yakho, emva koko uthenge iiodolo zesibini kuwo onke amacandelo, kwaye ekugqibeleni ufumane ikontrakthi yendibano.Ukuba aba baboneleli bakwilizwe elahlukileyo (Amaxesha amaninzi isenza), le nkqubo iya kuthatha ixesha elide.Kwindibano epheleleyo yePCB ye-turnkey, konke oku kwenziwa kunye.Inkqubo yokuthenga iyancitshiswa ibenye, oku kunokuphelisa lonke unxibelelwano namaqabane amaninzi.Ukunciphisa inani lonxibelelwano kunye neekowuteshini kunokunciphisa ithuba lokuphazamiseka kweprojekthi.Ukunika izicaphulo ezintathu ezahlukeneyo kuvula indawo enkulu apho iimpazamo zinokuthi zenzeke.Oku kwandisa amathuba okuba nomonakalo kwimveliso.
5. Kuya kuba lula ngakumbi
Ukuveliswa kweprototype yokuqala ngokuqhelekileyo kuyinkqubo ecothayo kwaye ibiza kakhulu.Ngenxa yoko, imisebenzi ekruqulayo enje ngokuphuma kwisitokhwe se-elektroniki, amaxesha acothayo okuhanjiswa, kunye nokuhlala unxibelelana nabathengisi abaninzi kwihlabathi liphela kuba yindinisa.Ngendibano ye-Trunkey PCB, unokuyila iprototype ngokufanelekileyo.Ukuphindaphinda iimveliso kunye nokuzizisa kwintengiso ngokukhawuleza ngexabiso elifikelelekayo akuzange kube lula.
Inkonzo yendibano ye-PCBFuture ye-PCB ye-turnkey ijolise ekuboneleleni ngesicwangciso sevenkile ye-PCB esinokonga imali yakho, ixesha kunye nokukruquka.Ubuchwephesha kunye nothembekileyo zingundoqo kwi-turnkey PCB indibano impumelelo, ezi zonke esinazo.Sinokubonelela ngeenkonzo eziguquguqukayo kunye nendawo enye yoqhagamshelwano, sithetha ngelixa sineqela leenjineli ezinamava ezixhasayo.inkonzo PCB indibano PCBFuture kaThixo ukhetho lokuqala kumashishini amancinci, iinkampani ezinkulu, kunye nosomashishini.
Zeziphi izinto eziphambili ezichaphazela ixabiso lendibano ye-turnkey PCB?
Xa kuziwa kwindibano ye-PCB ye-turnkey, izinto ezininzi zigqiba iindleko zayo.Ukuqala kwitekhnoloji esetyenziselwa inani lamacandelo, kukho uluhlu lwemiba echaphazela ngqo iindleko.Nangona kunjalo, into edla ngokulityalwa zizinto ezininzi ezingathanga ngqo ezinyusa iindleko zendibano yePCB.Ezi zinto ziquka iindawo ezifana nokunqongophala kwezixhobo zokuvavanya kunye nokunqongophala kwabasebenzi abaqeqeshwe kakuhle.Iindlela ezigqwesileyo (ezifana nokunqongophala koyilo lwendibano kunye noyilo lwemveliso) nazo zinokuba nefuthe elibonakalayo ekuphuculeni ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa iindleko.Kwinqanaba loyilo ngokwalo, amacandelo kufuneka akhethwe ngokucokisekileyo.Ngokufanayo, ukubekwa kwala macandelo kuya kuchaphazela neendleko.Ngokomzekelo, ukuqinisekisa ukuba uyilo lwenzelwe ukuvelisa kunokuhamba ixesha elide ekupheliseni iingxaki kwisigaba soyilo kunye nokulawula iindleko.Ukuba ayiphathwanga ngendlela eyiyo, uyilo kunye nokubekwa kwamacandelo kunokuchaphazela kakhulu iindleko.
Isishwankathelo, kukho izinto ezininzi eziphambili ezibandakanya:
1. Ubungakanani bomyalelo
2. Iimfuno zobugcisa zePCB ezifana neeleya, uhlobo okanye umphezulu kunye njl.
3. Xuba indibano ye-Surface Mount okanye ngeTekhnoloji yomngxuma.
4. Ibhodi ye-SMT yebhodi enye okanye eMacala aMabini
5. Ubungakanani obupheleleyo bamacandelo
6. Iindidi kunye nokuqheleka kwamacandelo
7. Ukuntsonkotha kwendibano yebhodi yesiphaluka eprintiweyo
8. Inani lamacandelo e-BGA kunye neeNdawo
9. Ezinye iimfuno ezizodwa
Kutheni ukhetha inkonzo yethu yendibano ye-turnkey PCB?
Kule minyaka, kukho abathengi abaninzi ngakumbi basebenzisa inkonzo yethu yendibano ye-turnkey PCB, kwaye uninzi lwabo lwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nathi.Siyakwazi ukusingatha yonke inkqubo kuquka iPCB Manufacturing, Components Sourcing, PCB Assembly, Testing kunye nokuthunyelwa kokugqibela.Umthengi wethu unokugxila kuyilo lwemveliso kunye neenkonzo zabathengi.
1. Ixabiso eliphezulu, professional Full Turnkey PCB Assembly ngaphezu 10 iminyaka.
Ukusukela ekusekweni kwayo ngo-2009, iPCBFuture iye yasebenzisana nabathengi kumazwe/imimandla emininzi, ngakumbi eYurophu.Sinokubonelela ngeenkonzo ezipheleleyo ze-Turnkey PCB, ukusuka kwi-PCB prototyping, ukuveliswa kwebhodi yesekethe, indibano yePCB ukuya kwiinkonzo zokuthengwa kwempahla, zonke ezinokuthi ziqinisekise umgangatho kunye namaxabiso angabizi.Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwi-aerospace, emkhosini, kwiimoto, kunxibelelwano lwedatha, ulawulo lwamashishini, i-Intanethi yeZinto, ezonyango, amandla, amandla, oololiwe, ukhuseleko olubalulekileyo, unxibelelwano, ukukhanya kwe-LED kunye nezinye iinkalo.Ngamashumi eminyaka yokuqokelela kunye namava.
2. Umgangatho wenkonzo ogqwesileyo
Njengenkampani ye-PCB, i-PCBFuture inokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zabathengi kwaye inokubonelela ngeenkonzo ezifike ngexesha kunye nezobuqu ukuba iinkampani ezininzi ezinkulu azinakubonelela.Ukwenzela ukulungisa ingxaki ebangelwa ngumahluko wexesha lamazwe ngamazwe, siye samisela iiyure zokusebenza eziguquguqukayo ukuze sisebenzisane nabathengi ngowona mlinganiselo mkhulu kwaye siphendule kubathengi ngexesha elifanelekileyo.Ukwaneliseka kwabathengi bethu okungumzekelo kububungqina bokukwazi kwethu ukukholisa abathengi.Xa sivelisa iiPCB, sibonelela ngeenkonzo zokuthengwa kwempahla kunye nendibano yePCB ngokweemfuno zabathengi, ngaloo ndlela sigcina abathengi ixesha kunye neendleko zokufumana ababoneleli.Kubathengi abadala abanee-odolo ezinkulu, sinemisebenzi yempendulo engaqhelekanga, njengeesampuli zasimahla kunye nezaphulelo zeodolo.Sikholelwa ukuba umsebenzi wethu onzima kunye nokunyaniseka kunokukholisa abathengi.
3. Ubhetyebhetye ngakumbi ukuhlangabezana neemfuno zakho zeNdibano ye-PCB
Nokuba ufuna iindibano ye-PCB yomzekelookanye ibhetshi encinci kunye nendibano ye-PCB ephakathi, sinokuhlangabezana neemfuno zakho ngokubanzi, kuba sinesebe lemveliso emibini kubo.Ngale ndlela, inokunqanda iingxaki xa iimveliso zakho zikwinkqubo yokuvelisa ngobuninzi, kuba sinalo lonke ulwazi lwemveliso.
Ngokuphathelele zonke iiprojekthi zendibano ye-turnkey PCB kunye nabathengi, siya kuba nomntu onoxanduva olukhethekileyo, ngoko ke ukuba abathengi baneemfuno ezongezelelweyo ezifana novavanyo, uluhlu lwempahla, ukupakisha okanye ukuthumela, sinokuhlangabezana nazo.
Eyona nto ibalulekileyo kuwe kukufumana iqabane ekunene, a oluthembekileyo turnkey PCB umenzi indibano uya kukunceda ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye ufumane ukuba imarike ngokukhawuleza.Singababoneleli bezinto zombane onokumthemba.
Zeziphi iintlobo zendibano ye-PCB ye-turnkey esinokubonelela ngayo?
Prototype turnkey PCB indibano
žVolume turnkey PCB indibano
žIndibano yePCB ekhawulezayo
žIndibano yesitshixo sokujika
I-žRoHS iyahambelana ne-lead-free
Sinakho ukuququzelela izixhobo ezingenayo, ulawulo lwenkqubo, kunye novavanyo oluhle, kwaye sinokukubonelela ngeenkonzo ezingcono kakhulu zendibano yePCB ukusuka kwibhetshi encinci ukuya kwimveliso yobuninzi.Ngexesha lenkqubo yofakelo lwe-PCB, ukuba kukho iziphene ezinxulumene noyilo lwe-PCB kunye nokuveliswa kwe-PCB, iinjineli zethu ziya kuxela iingxelo ze-DFM.
Unokukhetha njani oyena Mvelisi weNdibano yeTurnkey PCB?
Ngokubanzi, ezi zilandelayo zezona zinto zibalulekileyo xa ujonge oyena umenzi wendibano yeTurnkey PCB:
1. Umgangatho weBhodi yeeNcingo eziprintiweyo
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe ngumgangatho.Ewe, wonke umntu okanye inkampani iya kuhlala ifuna ukusebenzisa iibhodi zesekethe ezikumgangatho ophezulu kwiimveliso zabo.
Ngokubanzi, ii-motherboards ezikumgangatho ophezulu zinokunyamezela okungqongqo kwimiba ephambili.Ezi ziquka ububanzi kunye nezithuba zemikhondo, indawo kunye nobukhulu bayo yonke imingxunya yokubhola kunye ne-vias, kunye nobukhulu obuchanekileyo bobhedu lomkhondo.
2. INdibano ye-PCB kunye ne-PCB yezakhono
Izakhono yinto ekufuneka siyithathele ingqalelo.Ukuba umenzi unokuvelisa iPCB yakho kwaye ayihlanganise iya kuba ngumbuzo wokuqala ekufuneka siwazi.Kuya kufuneka uqonde kwakhona iintlobo zetekhnoloji ye-soldering, ibhodi yesekethe kunye nobukhulu becandelo, ukuhlolwa, iimfuno ze-PCB, kunye nezinye izakhono zokucwangcisa ezinokubonelelwa ngumthengisi.
3. Injani inkonzo yabathengi
Inkonzo yendibano yeTurnkey PCB ijolise ekuboneleleni ngesicwangciso sevenkile yePCB esinokonga imali yakho, ixesha kunye nokukruquka.Ubuchwephesha kunye nothembekileyo zingundoqo kwi-turnkey PCB indibano impumelelo, ezi zonke esinazo.Sinokubonelela ngeenkonzo eziguquguqukayo kunye nendawo enye yoqhagamshelwano, sithetha ngelixa sineqela leenjineli ezinamava ezixhasayo.
4. Yintoni Iindleko zendibano yePCB ye-turnkey
Iindleko ngokucacileyo ngumba obalulekileyo.Nangona kunjalo, kuyimfuneko ukulinganisa umgangatho wemveliso, ixesha lokuhambisa kunye neenkonzo ezinikezelwayo.Emva koko, ukuba le miqathango ayihlangabezani neemfuno zakho, ngoko awuzange ufikelele kwinqanaba elamkelekileyo.
I-PCBFuture yinkokeli yoshishino kwindibano ye-PCB ye-turnkey.Sisebenzisa izixhobo eziphambili kunye neenkqubo eziqhutywa yisoftware kwindibano yebhodi yesekethe yakho.Inqanaba ngalinye lenkqubo yokuvelisa yenzelwe ukuba ikhawuleze kwaye ichaneke.Kwaye zonke iinzame zethu zizama ukugcina iindleko zakho ngaphandle kokuthoba umgangatho wakho.
I-PCBFuture izenzele igama elihle kwishishini lenkonzo ye-PCB ye-turnkey epheleleyo yendibano ye-PCB yomzekelo kunye nomthamo ophantsi, indibano ye-PCB yevolumu ephakathi.Yintoni ekufuneka abathengi bethu bayenze kukuthumela iifayile zoyilo zePCB kunye neemfuno kuthi, kwaye sinokukhathalela wonke umsebenzi.Sikwazi ngokupheleleyo ukubonelela ngeenkonzo zePCB eziguquguqukayo kodwa sigcine iindleko zizonke kuhlahlo lwabiwo-mali lwakho.
Ukuba ujonge umenzi wendibano weTurnkey PCB ofanelekileyo, nceda uthumele iifayile zakho zeBOM kunye neefayile zePCB kusales@pcbfuture.com.Zonke iifayile zakho ziyimfihlo kakhulu.Siza kukuthumelela ikowuti echanekileyo kunye nexesha lokukhokela kwiiyure ezingama-48.
1. Ngaba i-PCBFuture ibonelela ngenkonzo yendibano ye-Turnkey PCB?
2. Ngaba unokubonelela ngenkonzo yeNdibano ye-PCB ye-turnkey yasimahla ngaphambi kokuveliswa kobuninzi?
Ewe, sinikezela ngenkonzo yendibano ye-PCB ye-turnkey yasimahla, ubungakanani abudluli kwi-5pcs.Kwaye ixabiso lomyalelo wakho wesampula alidluli i-2% yexabiso lemveliso yobuninzi (ngaphandle kwempahla).Okokugqibela kufuneka sihlawule umrhumo wesampulu kuqala kwaye sibuyise iindleko zesampulu yePCB ngexesha lemveliso yobuninzi.
3. Ngaba unikezela ngenkonzo yendibano ye-PCB ye-turnkey?
Ewe, unokukhetha inkonzo yendibano ye-PCB ye-turnkey.Ungaqhagamshelanasales@pcbfuture.comukwazi ngakumbi.
4. Ungacaphula ixesha elingakanani iindleko zendibano ye-PCB ye-turnkey?
Sidinga i-1-2 yeentsuku zokusebenza ukubhekisela kwiprojekthi yendibano.Ukuba awukhange ulufumane unikezelo lwethu, unokujonga ukuba ikhona na i-imeyile ethunyelwe sithi kwifolda yakho ye-imeyile eyiNxulumano.Ukuba asithumelanga i-imeyile, nceda uqhagamshelane sales@pcbfuture.com kabini uncedo.
5. Liliphi ixesha elilindelekileyo lokuziswa kwe-odolo ye-PCBA yokujika?
Ixesha elihamba phambili lokuzaliseka kwee-odolo ze-PCBA malunga neeveki ezi-2-5.Oku kubandakanya ukwenziwa kwePCB, ukuthengwa kwecandelo, kunye nendibano ye-SMT DIP.
6. Ndingakuthumelela amanye amacandelo kwii-odolo zam zendibano zexesha elizayo?
Ewe.Ngaphambi kokuba uzithumele kuthi, nceda uqhagamshelane nathi ngeenkcukacha ezipheleleyo zolwazi lokuthumela, ubuninzi, kunye neenombolo zenxalenye.
7. Zeziphi iifayile ozifunayo kwii-odolo zendibano yePCB?
Ngokuqhelekileyo, sinokucaphula ixabiso kuwe ngokusekelwe kwiifayile zeGerber kunye noluhlu lwe-BOM.Ukuba kuyenzeka, Khetha kwaye ubeke iifayile, umzobo wendibano, iimfuno ezikhethekileyo kunye nemiyalelo engcono ukuba usinike nathi.
8. Ngaba unokubonelela ngee-odolo zendibano ye-PCB yokujika ngokukhawuleza?
Ewe, sinokubonelela ngenkonzo ekhawulezayo.
9. Kutheni kufuneka sinikeze ulwazi olusisiseko lwenkampani yethu kunye neeprojekthi ukuze sifumane ikowuti?
Njengoko usazi, ngokwesiqhelo kuya kufuneka kuthathe ixesha elininzi ukucaphula iiodolo zeTurnkey.Kwaye ukuze unikeze ngenkonzo engcono kuwe, ngokuqhelekileyo siya kufuna ulwazi olusisiseko lwenkampani ukuseka ifayile kubo bonke abathengi.Kwakhona ukuba siyayazi isicwangciso soluhlu olude lweeprojekthi, siyakwazi ukucaphula elona xabiso lilungileyo kunye nesicwangciso kuwe.
10. Zeziphi iingenelo eziphambili zePCBFuture?
Ulawulo lomthengisi olulula, Ugcino lweendleko, umgangatho ophezulu othembekileyo, Uguquguqukayo, Ubuchwephesha